यी हुन् किशोर किशोरीले हरेक दिन खानुपर्ने खानेकुरा - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ यी हुन् किशोर किशोरीले हरेक दिन खानुपर्ने खानेकुरा
डा अर्चना कार्की कर्णाली केयर इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा. ली शनिबार, २०७८ वैशाख ११ गते, १२:५८ मा प्रकाशित
सामान्य अर्थमा पोषिलो खाना भनेको हाम्रो शरीरको सिस्टमहरुलाई चलाउन आवश्यक पर्ने खाना हो । जसमा भिटामिन, प्रोटिन, कार्वोहाइड्रेट पर्छ । पोषिलो खानालाई हामि चारवटा रङबाट चिन्न सक्दछौ । पहिलो रङ खैरो जसमा चनाहरु पर्छ । चनाबाट धेरै मात्रामा प्रोटिनहरु पाउन सकिन्छ । यसका साथै अन्य गेडा गुडि तथा माछामासु पनि लिन सक्छौ ।
त्यस्तै, दोस्रोमा पहेलो रङ लिन सकिन्छ । जसमा मेवा, गाजर लगाएत फलफुलहरु पर्दछ । तेस्रो सेतो रङ हो जसमा भात गहुँ दुध, दहि, घयू, पर्दछ । अर्को रङ हरियो हो । हरियो रङमा एक्दम धेरै साग पात , तरकारि, गोभिहरु पर्दछ । यहि चारवटा रङलाई लिएर हामिले खाना तयार गरेउ भने त्यो नै पोषिलो आहार हो ।
किन चाहिन्छ किशोर किशोरीलाई पोषिलो खानेकुरा ?
सामान्यतयाः १३ देखी १९ बर्ष उमेरसम्मकालाई हामी किशोरकिशोरी भनेर बुझ्द्छौं । यस अवस्थामा किशोरिको महिनावारी सुरु हुन्छ भने किशोरहरुको पनि वैस्क अवस्था सुरुहुन्छ । तसर्थ किशोरावस्थामा शारीरिक तथा मानसिक विकास तीव्र गतिमा हुने । उचाई तथा वजन बढ्ने लगाएतका थुप्रै परिवर्तनहरु आउने हुँदा यस अवस्थामा उमेर अनुसार हुने वृद्धि विकास र सिकाईको लागि पोषणको आवश्कता हुन्छ । बजारमा पाईने खानेकुरा भन्दा स्थानीय स्तरमा नै उपलब्ध हुने खानेकुराहरुबाट घरमा नै बनेका खाना तथा खाजा खानुपर्दछ । यदि किशोर अवस्थतामा पोषिलो खाना प्रयाप्त मात्रामा पाईएन भने पढाई, खेलकुद तथा शारीरिक क्रियाकलापमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्ने हुन्छ ।
किशोरकिशोरीहरुले हरेक दिन खानुपर्ने खानाहरु
किशोरकिशोरीहरुले खाद्यान्न, गेडागुडी, सागपात र फलफुल तथा माछामासु अण्डा गरी ४ प्रकारका खाना हरेक दिन खानुपर्छ । शरीरलाई अत्याधिक प्रोटिन चाहिन्छ । त्यसैले दाल, गेडागुडी, माछामासु, अण्डा, दुधदहि, मोही, घ्युजस्ता खानेकुराहरु खानुपर्छ । ढीडो, मकैको च्याँख्ला, भात, रोटी, चिउरा मकै जस्ता अन्नले शरिरलाई चाहिने शक्ति दिन्छन्। साथै पानी लाई पनि बिर्शनु हुदैन । यसका साथै हामिले शरीरमा पानीको कमीले हुन सक्ने विभिन्न असरबाट बच्न प्रर्याप्तमात्रामा पानी पिउनु पनि उत्तिकै आबश्यक छ ।
अण्डामा शरीरलाई चाहिने धेरै पोषकतत्वहरु हुन्छन्। अण्डा किन्न सस्तो र बनाएर खान सजिलो पनि छ । त्यसैले अण्डा नियमित खानेगर्दा शरीरलाई चाहिने धेरै पोषकतत्व प्राप्त हुन्छ । महिनावारीको बेला शरीरलाई अरु बेलाको भन्दा अझ धेरै पोषणयुक्त खाना चाहिन्छ । त्यसैले यस बेला, अरुबेला भन्दा अझ धेरै पाेिषलो खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ । महिनावारी सबै महिलाहरुलाई हुने जैविक प्रक्रिया भएकोले कुनै पनि खाना बार्नुपर्दैन । खानेकुरा सफा, स्वच्छ, स्वस्थ्यकर र सहि ढंगबाट बनाईएको हुनपर्दछ ।
ओसिएको, ढुसि लागेको, कुहिएको वा गन्हाएको, झिंगा भन्किएको, नछोपी राखिएको, बासी, अखाद्य रंग मिसाएको तथा खान अयोग्य खानेकुराहरु खानु, खुवाउनु हुँदैन । खाना बनाउनु र खानु अगाडी सधैं साबुन पानीले मिचिमिची हात धुनुपर्दछ ।